တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: သျှင်ဥတ္တမကျော် တောလား
အဲသည် တောလားထဲက စာသားတွေကို စိတ်ထဲမှာ စပြီး စွဲငြိမိတာက….
“သစ်ရွက်ရော်ရီ၊ ဣန္ဒနီဝယ်၊ သိင်္ဂီတ၀က်၊ ဖက်၍ဆေးစုံ၊ ခြယ်သောပုံသို့….” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို ထုတ်နှုတ်ပြီး ရှုမ၀ ရုပ်ရှင်၊ ဒါရိုက်တာ မောင်ဆွေတင့်ရဲ့ “သိင်္ဂီတ၀က်၊ မြတ၀က်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကြော်ငြာ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ တွေ့ရကတည်းက စိတ်ဝင်စားခဲ့တာ။
တကယ်တမ်း အဲဒီကဗျာကို စသင်ရတော့ တက္ကသိုလ်မှာ ဒုတိယနှစ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ သင်ရတဲ့ အပိုဒ်က “လေခမြေသက်၊ ဈာန်ဝိတက်သို့…. ကနေစပြီး… ပူဇော်လို့ငှါ သီးကြရှာ၏… အထိရယ်၊ ပြီးတော့ တိမ်ညိုမိလ္လာ၊ တိမ်စူကာ အပိုဒ်ရယ် နှစ်ပိုဒ်ပဲ သင်ခဲ့ရတာပါ။
အချိန်ပေးပြီး တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ဒါမျိုးစာတွေက ကလူသစ်အတွက်ကတော့ နွားကို ပလာတာကျွေးသလိုပဲနေမှာ ခွိခွိ
7/28/2009 4:55 PM
အပင်ပန်းခံပြီး တင်ပြထားတာ ကျေးဇူးပါ။ အားပေးလျက်။
မေဓာဝီဆရာမရေ့ သိပ်ကျေးဇူးတင်ရပြန်ပီနော်။ တကယ်ပါဗျာ။ တောင်းသမျှပေးနိုင်တဲ့ ဘလော့ပိုင်ရှင် မေဓာဝီကို အစဉ်အားပေးလျှက်ပါ။ ကျနော်ကတော့ ကျောင်းစာတွေနဲ့ နပန်းသတ်နေရလို့ မရေးနိုင်သေးဘူး။ သြဂုတ်လကုန်မှပဲ ကောင်းကောင်းပြန်ရေးနိုင်တော့မယ်။ ကျေးဇူးနော်။
MDW တင်ပြမှပဲ ဒီလိုစာမျိုး ဖတ်ရကောင်းမှန်း သိတော့တယ်... တချို့ စကားလုံးတွေ သိပ်နားမလည်ပေမယ့် ဒီလိုသဘောပေါက်တယ်...
အောက်ဆုံးတကြောင်းကတော့ ဘယ်တော့မှ မေ့တော့မယ် မထင်ဘူး...
7/28/2009 7:08 PM
မောင်ဆွေတင့်ရဲ့ “သိင်္ဂီတ၀က်၊ မြတ၀က်” ရုပ်ရှင်ကြော်ငြာမှာ ကဗျာစာသားကို နောက်တမျိုး ထည့်သွင်းထားပုံက “မြရောင် ရွှေရောင်၊ လေသာတောင်မှာ၊ ညိုရောင်ရောစပ်၊ ဇောတရသ်သို့၊ (ပြောစမှတ်ထူး၊ သောမနဿ်နူးစေဖို့ ??)” ဆိုတဲ့ ထုတ်နှုတ်ချက်ကလေးကိုလည်း ရေးရေးမှတ်မိတယ်။ အဲဒါ ထုတ်နှုတ်ချက်ကရော ရှင်ဥတ္တမကျော် တောလားထဲက စာသားတွေပဲလား… မမေဓါဝီ။ ဒီပို့စ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အပိုဒ်ထဲမှာ “ဇောတရသ်ချယ်” ဆိုတဲ့ အသုံးကို တွေ့မိလို့ပါ။ ဇောတရသ်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကလေးကိုပါ တဆိတ်လောက် ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပေးပါ။
7/29/2009 3:34 AM
အားလုံးပဲ ... လာဖတ်ကြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ကိုပေါရေ .. ကိုပေါပြောတဲ့ "မြရောင်ရွှေရောင်" ဆိုတာ ကျမဖတ်မိသလောက်တော့ ဒီထဲမပါဘူးရှင့်။
ဇောတရသ် ဆိုတာကတော့ ဇောတိရသ် ကိုပြောတာပါ။ စာရိုက်စဉ်က ကျမ ကျန်ခဲ့သလားတော့ မပြောတတ်ဘူး။ မူရင်းစာအုပ် အနားမရှိလို့။
စတုတ္ထပိုဒ်မှာတော့ ... "မဟာဇောတိရသ်၊ လောကဓာတ်ဝယ်၊ မျက်မြတ်ရည်မှန် ..." ဆိုပြီးပါတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဇောတိရသ်ဆိုတာက အရောင်တောက်ပြီး အလိုပြည့်စေသော မနောမယ ပတ္တမြား (နေမင်းစိုးမိုးသော ရတနာ) လို့ နေးတစ်ဖိုရမ် တုန်းက ဘကြီးဝိဟာရီ ဆိုသူ အနက်ဖွင့်ပေးထားတာ ရှိပါတယ်။
ဦးဟုတ်စိန်ရဲ့ အဘိဓာန်ထဲမှာတော့ ခုလိုတွေ့တယ်။
ဇောတိရသ် = the all wish-giving gem (ဇောတိရသ) ... တဲ့။
အဲဒီလောက်ဆိုရင် ကိုပေါ ကျေနပ်လက်ခံလိမ့်မယ် ထင်ပါရဲ့။
7/29/2009 4:16 AM
မမေဓါဝီ…. အင်မတန် ကျေနပ် နှစ်သက်မိပါတယ်။ အခုလို ဖြေပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်ပြောတဲ့ စာသားဟာ အဲသည်ထဲမှာ မပါဘူးဆိုရင် ရှင်ဥတ္တမကျော် တောလားထဲက မဟုတ်လို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်တယ်။ ဇောတိရသ လို့ ဖြေပြလိုက်မှ ဆက်စပ်ပြီး မှတ်မိလာပြီ။ ဟိုမေရှင် သီချင်းထဲ (မောင်ရှေ့ကို တည့်တည့်လျှောက်မယ်လေ၊ မေလည်း တည့်တည့်လိုက်ကာ လျှောက်မယ်မောင်ရေ.. ဆိုတဲ့သီချင်း) မှာ အဲသည် ဇောတိရသ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း ပါတာပဲ။ အခုလို့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ပါ သိရတော့ ပို အဓိပ္ပါယ်ရှိသွားတာပေါ့။
“မိဘ၀တ္တရား ချီးမြှင့်အပ်သော အရွယ်ပေ၊ တင့်တယ်လျောက်ပတ်ရွေးချယ်၊ မျိုးနွယ်တူဆွေ၊ (သုပဏ္ဏကအခါ?) မင်္ဂလာ ရက်မြတ်မလေ၊ စုလျားရစ်ခွေ ဇောတိရသ ပတ္တမြား နိတုံရွှေ.. မင်္ဂလာရှိကြောင်း ကျက်သရေ… အောင်ကြောင်းဆုခြွေ… လိုရာ အဖြာဖြာ အောင်ပါစေ… မောင်မယ်တွေ”
အရင်ကတော့ ဆရာလေးတပါးရေးတယ်ထင်လို့ ၀င်မဖတ်မိဘူးဗျ။ကိုမင်းထက်ကတဆင့်ရောက်လာတာဗျို့။ လာရကျိုးနပ်ပါတယ် မမေဓာ။ကျေးဇူးပါနော်။
9/06/2010 8:33 PM
Hey really nice weblog!Guy Beautiful . Astounding.I'll bookmark your website and take the feeds also.
10/29/2010 4:01 AM
ကျေးဇူးကြီးလှပါတယ်မမေဓါဝီ.. နောင်လာနောက်သားများအတွက် ကြီးမားသောအကျိုးကိုဆောင်တာပါပဲ
တောလား ၉ပိုဒ်မှာ လ အချတွေဟာ ဆရာတော်တမင်တကာသုံးခဲ့မှန်းသိသာလှပါတယ်။
လ ကို လတ္တံ့ လို့ပြန်ဆိုတာကိုဘ၀င်မကျမိပါ။
မှတ်ဖူးခဲ့တာလေးတင်ပြပါရစေ။ အဲ့ဒီခောတ်က လ ဆိုတဲ့အသုံးကို နုနုရွရွ လှလှပပ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးလာကြတော့ ဆရာတော်က တမင်ရွဲ့ ပြီးသုံးခဲ့တယ်၊ အရွှန်းဖောက်လိုခဲ့ပုံလဲရပါတယ်တဲ့